प्राकृतिक सामग्री संग अल्फा आत्मा कुकुर खाना | विश्व कुकुरहरु
अल्फा आत्मा फिड
सुसी फोंटेला | | कुकुर र कुकुरहरूलाई खुवाउँदै
को फिड बढ्दो गुणस्तरको हो र यसमा प्राकृतिक सामग्रीहरू छन् ताकि कुकुरहरूले फेरि धेरै स्वस्थ आहारको आनन्द लिन सक्दछन्, जसले ठूलो दीर्घायु सुनिश्चित गर्दछ। यो आहार मूलमा फर्कने लक्ष्य राख्छ, जब कुकुरहरूले प्रकृतिको बीचमा खाए, तिनीहरूलाई उनीहरूको जीवनको प्रत्येक अवधि अनुसार आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरू प्रदान गर्दै।
अल्फा आत्मा उच्च गुणवत्ता फिड को एक ब्रान्ड हो यसले यसको उत्पादहरू बनाउन प्राकृतिक सामग्रीहरू प्रयोग गर्दछ। उनीहरूसँग अन्नहरू, ग्लुटन वा डिहाइड्रेटेड उत्पादनहरू छैनन्। प्रत्येक लाइन कुकुरको स्वास्थ्य सुधार गर्न र एलर्जी र खाना पचाउन नसक्ने समस्याहरूको समस्याबाट बच्न केवल उच्च गुणस्तरको उत्पादन प्रदान गर्ने कुरामा केन्द्रित छ।
1 अल्फा आत्मा ड्राई फूड
1.2 अल्फा आत्मा मात्र माछा
1.3 अल्फा आत्मा पिल्ला
1.5 हप्ता मेनू
2 अल्फा आत्मा अर्ध-चिसो खाना
3 अल्फा आत्मा क्यान्स
4 खाजा, बार र ह्याम हड्डीहरू
अल्फा आत्मा ड्राई फूड
El अल्फा आत्मा ड्राई फूड एक उत्तम विकल्प हो कुकुरहरुलाई खुवाउन तिनीहरूको सुक्खा फिड गुणस्तरको मासु र माछाले बनेको छ, अनाज वा मीट खानालाई बेवास्ता गर्दै, आजका फिडहरूसँग जस्तै, फर्महरूमा गोस्बी। यो एक सुक्खा खाना हो जसमा पाँच फरक सुत्रहरू छन्, विभिन्न कुकुरहरूलाई लक्षित गरी। तिनीहरू झोलामा आउँछन् जुन kg किलोग्राम वा १२ किलोग्राम तौल लिन सकिन्छ। फिडको विशेष विशेषताहरू हुन्छन्, किनकि यो आफ्नै रसमा पकाइएको छ र चिसो थिचिएको छ। तिनीहरूसँग उच्च palatability र पाचन क्षमता छ, छाला रक्षा र 3% प्राकृतिक हो।
फिड कुकुरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुहोस्, तिनीहरूको कोट र छाला सुधार र र फलामको साथ खाद्य पदार्थ समावेश एनीमिया बिरूद्ध रक्षा। तिनीहरू कुकुरका लागि आवश्यक पोषकहरू, जस्तै ओमेगा3र,, बायोटिन वा भिटामिन एसँग समृद्ध छन्।
El बहु-प्रोटीन खाना प्रोटीनको आवश्यक खुराकको साथ बनाईन्छ वयस्क कुकुरको लागि जुन शारीरिक गतिविधिहरू विकास गर्दछ। यी फिडहरूमा गुणस्तरको मासु र ताजा माछाहरू हुन्छन्, डिहाइड्रेटेड मासु वा फ्लोरहरू थप्नबाट जोगिनुहोस्, जसले फिडमा अनुवाद गर्दछ जसले कुकुरलाई चाहिने सबै थोरै मात्र प्रदान गर्दछ। प्रोटीन तपाईको मांसपेशीहरु को लागी आवश्यक छ र तपाइँको दैनिक गतिविधि को लागी।
यसलाई किन्नुहोस् यहाँ.
अल्फा आत्मा मात्र माछा
यो फीडको अल्फा आत्मा दायरा माछाले मात्र बनेको हुन्छ, मासु त्याग्दै। यस तरिकाले हामी ताजा माछाहरूबाट उच्च गुणस्तरको प्रोटीनहरू प्राप्त गर्छौं जसले कुकुरलाई उत्तम अवस्थामा कोट र छाला कायम राख्न ओमेगा and र provide पनि प्रदान गर्दछ। यो सुख्खा खाना संयुक्त समस्याहरूबाट बच्न र हृदय सम्बन्धी समस्याहरूका लागि तयार गरिएको हो।
अल्फा आत्मा पिल्ला
कुनै पनि ब्रान्डको फिडमा जस्तै उनीहरूसँग एक छ यसको कुकुरको चरणमा कुकुरको लागि विशेष तयार गरीएको दायरा। यस अवधिमा तिनीहरूको आवश्यकताहरू धेरै फरक हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरूलाई विशेष फिड चाहिन्छ। यसमा विकासको चरणमा तपाईको हड्डीहरूका लागि संज्ञानात्मक विकास र क्याल्सियम समर्थन गर्न आवश्यक फ्याट एसिडहरू छन्।
यस फिडले समावेश गर्दछ ताजा बतख, टर्की र कुखुराको मासु। यी दुबला प्रोटिनहरूले उच्च गुणस्तरको प्रस्ताव गर्दछ, कुकुरका लागि डिजाइन गरिएको हो जसले यसको वजन कायम राख्न मद्दत गर्न प्रोटीन चाहिन्छ।
यो दायरा अल्फा आत्मा को कुकुरहरु को सबै प्रकार को लागी, को दैनिक खाना को लागी गरीएको छ। त्यहाँ केही फिडहरू प्रयोग हुन्छन् जुन निश्चित समयावधिका लागि प्रयोग गरिन्छ, तर हामी प्राय जसो कुकुरको आधारभूत आवश्यकतालाई समाहित गर्दछौं, जस्तै हप्ता मेनू। यो ताजा मासु र माछा मिलेर बनेको छ। यो hypoallergenic हो, कुकुरको कपाल र शरीर सुधार गर्न पोषकहरू र भिटामिन, खनिज र प्रोटीनको आवश्यक खुराकको साथ।
यसलाई किन्नुहोस् कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।.
अल्फा आत्मा अर्ध-चिसो खाना
अल्फा आत्माको अर्ध-ओसिलो खाना सुविधाजनक एकल-सेवारि served्ग डोजमा दिइन्छ जुन हामीलाई खाना राम्रोसँग राशन गर्न मद्दत गर्दछ। छन् एकल खुराकले उत्पादको २१० ग्राम समावेश गर्दछ र त्यहाँ धेरै ढाँचाहरू छन्,,, २ or वा single7एकल डोजको साथ। यो सबै कुकुरहरूका लागि उपयुक्त छ र पाल्तु पशुहरूको हेरचाहको लागि उत्तम गुणहरू प्रदान गर्दछ। यसको स्वाद राम्रो हुन्छ र हड्डी, मांसपेशिहरु र अंगहरूको कार्यप्रणालीलाई बढावा दिन एनीमिया, मासु वा माछा प्रोटीन र पौष्टिक तत्त्वहरूलाई रोक्न लोहा पनि हुन्छ। उपलब्ध स्वादहरू केवल माछा र मल्टिप्रोटीन हुन्।
अल्फा आत्मा क्यान्स
अल्फा आत्मा क्यान्समा तपाईं भिजेको खाना पाउनुहुनेछ। यो खाना उच्च गुणस्तरको कच्चा मालको साथ बनेको छ खरायो, बतख, टर्की वा कुखुरा र माछा जस्ता मांसबाट प्रोटीन सामन जस्तै
स्वाद संयोजनहरू धेरै रोचक छन् र यस दायरामा हामी फेला पार्न सक्छौं: साल्मन र ब्लूबेरी, खरायो र केरा, भेडा र नाशपाती, डक र किवी, गाईको मासु र तरबूज, चिकन र अनानास, पोर्क र स्याउ, टर्की र रास्पबेरी, र स्टर्जन र स्ट्रबेरी। यो ठूला वा सानो आकारमा बेचिन्छ ट्रे मा वितरण, ठूलो एक ट्रे मा छ डिब्बा संग र एक सानो मा ट्रे मा बाह्र क्यान संग।
खाजा, बार र ह्याम हड्डीहरू
अल्फा आत्मा फर्म भित्र हामी केवल एक दैनिक आधार मा हाम्रो घरपालुवा जनावर पोषण गर्न खाना पाउन, तर हामी पनि छ स्वादिष्ट स्नैक्स, बार र ह्याम हड्डीहरू तिनीहरू प्रशिक्षण को लागी पुरस्कार दिन वा दिन को समयमा प्रदान गर्ने साधारण उपहार को रूप मा सेवा दिन सक्दछन्।
को खाजा सानो व्यक्तिगत सर्विंगमा बेचिन्छ त्यो कुकुरलाई दिनको लागि उपयुक्त छ। यस प्रकारको खाजा कुकुरको आहारको आधारमा हुनु हुँदैन, तर हामीले समय-समयमा केवल प्रदान गर्ने एउटा उपचार। त्यसकारण यो एक समय मा एक सानो सेवा दिन मात्र महत्वपूर्ण छ, त्यसैले तिनीहरू अलग छन्। खाजाको बीचमा बिभिन्न स्वादहरू छन्, जस्तै गोमांस, कुखुरा, चीज र दही, कलेजो, माछा, भेडा र बतख। यो कन्टेनरले यसको खरीदको डेढ बर्षसम्म यसको संरक्षणको अनुमति दिन्छ, यद्यपि यो खोले पछि अधिकतम 30० दिनमा उपभोग गर्नुपर्दछ। ती दुई ढाँचाहरूमा बेचिन्छन्, एउटा units 48 युनिटहरूको साथ र अर्को १ 16 युनिटहरूको साथ।
बारहरू ती चीजहरू हुन् जुन हाम्रो घरपालुवा जनावरहरूको लागि पनि हुन्, जुन बोक्न र राख्न सजिलो छ। प्राकृतिक खानाको साथ बनेको, बारहरू व्यक्तिगत हुन्छन् र चार बारको पट्टि आउँछन्। स्वादहरूका लागि, उनीहरूसँग समान प्रकारहरू छन् जुन हामी अल्फा स्पिरिट स्नैक्समा भेट्टाउन सक्छौं। तिनीहरू or 48 वा individual० व्यक्तिगत बारहरूको बक्सहरूमा र १२ वा १ of को स्ट्रि inमा प्रत्येक प in्क्तिमा bars बारहरू सहित आउँदछन्।
को हेम हड्डीहरू पोषक-घना खाना हुन् त्यो कुकुरको मनोरन्जन गर्दछ। तिनीहरू १००% सेरानो पोर्कका हड्डीहरू हुन्। यो प्रोटिन, क्याल्शियम र कुकुरको लागि विशेष गरी खुशीको स्रोत हुनेछ। बिभिन्न तौलका कुकुरहरुलाई दिन विभिन्न आकारहरु छन्। म्याक्सीबाट मानक, मध्यम वा ब्रोसेट। तिनीहरू बक्से वा भ्याकुम प्याक हुन्छन्।
अल्फा आत्मा ब्रान्डले प्रस्ताव गरेको सबै कुराको बारे तपाई के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » कुकुर र कुकुरहरूलाई खुवाउँदै » अल्फा आत्मा फिड